सात नम्बर प्रदेशको नामाकरण मानस प्रदेश राख्नुमा ऐतिहासिकता छ
प्रकासित मिति : ३० मंसिर २०७३, बिहीबार प्रकासित समय : १२:०१
 डा. पदमराज कलौनी
पालको संविधान (२०७२) ले प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलिय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा प्रवेश गर्दै नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेश स्वतन्त्रता, न्यायिक न्यायपालिका लगायत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गर्दै समाजवादप्रति प्रतिबद्धता रहेको प्रण गरेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको परिकल्पनासँगै नेपाल राष्ट्रलाई सातवटा प्रदेशिकरण गरेको छ । नेपाललाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा राज्यको संरचना बिभाजन गरेर राज्यशक्तिको बाँडफाँड गरिएको छ । बाजुरा, बझाङ्ग, अछाम, डोटी, कैलाली, दार्चुला, डडेल्धुरा, बैतडी र कन्चनपुरको भूगोललाई समेटेर बनाईएको सात नम्बर प्रदेशको नामाकरण गर्न के कस्ता आधारहरु हुने र सामथ्र्य र पहिचान के हुने ? भन्ने विभिन्न चर्चा परिचर्चा चलाउने उद्देश्यले आलेखलाई केन्द्रीत गरिएको छ । नामाकरणका लागि केही नामहरु सार्वजनिक भएका छन् । सार्वजनिक भएका नामले समग्र नौ वटै जिल्लाको भूगोल (हिमाल देखि तराई) को नेतृत्व गर्न सक्दैन भन्ने आशय पनि हो । सामथ्र्य र पहिचानलाई प्रमुख आधार बनाएर गरिने सीमाङ्कन र नामाङ्कन नेपालको सन्दर्भमा सजिलो देखिदैन । पहिचानका प्रसस्त आधार भएर पनि सामथ्र्यमा टेक्ने र सामथ्र्यका आधारलाई छोडेर पहिचानमा टेक्ने राजनीतिक दलहरुको ढुलमुले र स्वार्थी निर्णयले सिमाङ्कनलाई विवादमा तानेको तथ्य हाम्रा सामु जीवन्त छ । संविधान सभाले नामाङ्कन कार्य थाँती राखिनुले पनि यो समस्या झन बल्झिने तर्फ संकेत गरिरहेको छ । संविधान सभाद्वारा भै’गरेको सीमाङ्कनप्रति सबैतिर खुशीको अवसर देखिएन । मदेशवादी दलहरुको असन्तुष्टीको कारणले भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगाएको अवस्था छ । आयोग वा संघीय प्रदेशले गर्ने नामाङ्कन सहज विषय होइन । पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा संघीयताको सीमाङ्कन र नामाङ्कन गरिएको भए सायद बिरोधको स्वर मत्थर हुने सम्भावना थियो ।
भावी राजनीतिमा आफ्नो भूगोलमा कसरी टिकीरहने भन्ने नेताहरुको कुटील चालकै कारणले संविधान सभाको पवित्रता माथि सीमाङ्कनले ठूलो चुनौती थपेको छ । संविधान घोषणासँगै संशोधनको प्रस्ताव घोषणा गर्ने पक्षबाट आउँनु झन संकटलाई दिशानिर्देस गराएको छ । केही प्रभावशाली भनिएका नेताको हैकम तथा स्वार्थका कारणले गरिएको भनिएको सीमाङ्कनको नियती नामाङ्कनले नब्यहोरोस् भन्नेतर्फ सोचेर आगामी दिनमा सामथ्र्य र पहिचानका आधार खोज्न कसैले कन्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन । सत्य र तथ्यगत तथा ऐतिहासिक प्रमाणलाई सबैलाई मान्य हुन्छन नै ! यसै सिलसिलामा सात नम्बर प्रदेशको नामाङ्कन “मानस प्रदेश” हुनुपर्दछ भन्ने आधार प्रस्तुत गर्दै बहसका लागि आलेखलाई केन्द्रीत गरेको छु । हरेक प्रदेशको नामाङ्कन गरिदा ऐतिहासिक, भौगोलिक, साँस्कृतिक, आर्थिक आदि तथ्यहरुलाई प्रमाणिक रुपमा हेरियोस् भन्ने आग्रह पनि हो । सात नम्बर प्रदेशलाई “मानस प्रदेश” किन राख्ने ? भन्ने सन्दर्भलाई ऐतिहासिक रुपमा हेर्दा स्कन्द पुराणमा हिमालयलाई “खण्डास्य पञ्च हिमालस्य कथितास्य नैपाल कूमाँचंलौ । केदारोकथ जालन्धरोकथ रुचिर काश्मीर संज्ञोकन्तिमस्य ।” उल्लेख गर्दै हिमालयलाई पाँच भौगोलिक खण्डमा बिभाजन गरिएको छ । अर्थात हिमालयको नामाकरण नेपाल, कुर्माञ्चल, केदारखण्ड (गढवाल), जालन्धर (हिमाञ्चल प्रदेश) र सुरम्य काश्मीर भनेर वर्णन गरिएको छ । पौराणिक ग्रन्थहरुमा कुर्माञ्चल भनेर मानसखण्डलाई भनिएको छ । विश्वको आदि ग्रन्थको रुपमा प्रशिद्ध ऋग्वेदमा मेरुमानसको शुक्ष्म रुपले वर्ण गरिएको छ । मानसखण्डकै भागलाई वेदले हिमवतमेरु भनेर स्विकार गरेको छ । मानसखण्डको इतिहास हेर्दा पौराणीककाल देखि नै पाईन्छ । केदारखण्ड (वर्तमान गढवाल) मानसखण्ड वर्तमान भारतको कुमाऊँ र उत्तराखण्ड राज्य तथा नेपालको महाकाली, सेती र कर्णाली नदीसम्मको भूभागलाई मानसखण्डको रुपमा स्विकार गरिएको पाईन्छ । वेदमा आर्याब्रतको उत्तरी भूभाग कैलास मानसरोवरसम्मको सम्पूर्ण भूखण्डलाई मानसखण्डको रुपमा व्याख्या विश्लेषण गरिएको छ ।